कृषिमन्त्री हुँदा मैले गरेको काम नै मेरो जितको आधार हो : पूर्व कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरी... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका ३६ वर्षिय गौरीशंकर चौधरी पूर्व कृषिमन्त्री हुन् । कैलारी गाउँपालिका–२, बसौटीका स्थानीय समेत रहेका चौधरीले ०५३ सालदेखि आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरे । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा ०५५ मा जनमिलिसिया, ०५६ देखि ०६१ सम्ममा उनी स्क्वाइट (सैन्य दस्ता), सेक्सन कमाण्डर, प्लाटुन कमाण्डर, कम्पनी कमाण्डर हुँदै बटालियन कमाण्डरसम्मको भूमिका निर्वाह गरे । ०६३ देखि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य र ०७३ देखि पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका चौधरीसँग नेपालीपत्रको लागि लखन चौधरीले चुनावी गतिविधिबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, जनताको गुनासो के छ ?
जनताको मुख्य माग नै विकास हो । किन विकास भएन भन्ने अहिलेको प्रमुख जनगुनासो हो । संक्रमणकाल अझै जारी रहेकोले र स्थायी सरकार नभएकै कारण विकासले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । इन्डियामा हेर्नुस्, मोदीले अझै पाँच वर्षे आफ्नो सरकार चलाई रहका छन् । मजाले आफ्नो भिजनसहित सरकार चलाई रहेका छन् । तर यहाँ हेर्नुस् ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ । ०७० सालयता नेपालमा ४ जना प्रधानमन्त्री भइसके । जसकारण यहाँ विकास हुन नसकेको हो ।
त्यसैले हामीले जनतालाई अनुरोध गरिरहेका छौँ, वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएमा, दुई तिहाईको सरकार बनाएमा हामी पाँच वर्षमा नयाँ विकास, नयाँ गति, नयाँ परिणाम दिन सक्छौँ । आफ्नो कार्यक्रमलाई नमूनाको रुपमा अगाडी बढाउन सक्छौँ । यो विषयलाई हामी जनतामाझ राख्दै आएका छौँ ।
तपाईको मुख्य एजेण्डा के–के हुन ?
हाम्रो मुख्य एजेण्डा संविधान कार्यान्वयन हो । दोस्रो विकास निर्माण हो । यो चुनाव विकास निर्माणकै लागि हो । यसमा भौतिक संरचना निर्माण, पूलपुलेसो निर्माण, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आउँछन् । मैले प्राथमिकताका साथ भन्ने गरेको छु, जबसम्म राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दैन तबसम्म कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण हुनै सक्दैन, देश समृद्ध बन्नै सक्दैन ।
फलतः मैले कृषिमन्त्री भएको छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेको छु । राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साना किसानको समृद्धिले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँछ । अर्कोतिर राज्यले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । आज हाम्रो यहाँ नदी किन भयो भनेर भन्ने अवस्था छ । हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । सदुपयोग भएको खण्डमा देशको अर्थतन्त्र त्यसै बलियो भैहाल्छ नि । जडिबुटी, पर्यटन, खानीमा लगानी गरे पर्याप्त सम्भावना छ । त्यसैले यी सम्भावनाको उजागर गर्ने र निकास खोज्ने नै मेरा एजेण्डा हुन् ।
तपाईँको जित्ने आधार के हो ?
हामीले निरन्तर जनताको सुख–दुःखमा साथ दिएका छौँ । सँगै नमूना विकासका कार्यक्रम गरेर देखाई सकेका छौँ । उदाहरणको लागि उदासीपुरमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तगरगत गहुँ सुपर जोन स्थापना, घोडाघोडीको १ देखि ९ वडा र मुनुवा थापापुर, जोशीपुर जोडेर तेलहन जोन कार्यक्रम राखिसकेका छौँ । पवेरामा धान ब्लग राख्यौँ । जिल्लाभरी माछा ब्लग कार्यक्रम, भजनी, धनगढीलगायत क्षेत्रमा कृषिका विभिन्न ब्लक राखेका छौँ । तत्कालीन आफ्नो क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानमा अर्टिजन बोरिङ, सिचाईँ कुलो सञ्चालन गरेको छु । पहलमानपुरमा तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरको योजना ल्याएको छु । यो सुदूरपश्चिममै सबभन्दा ठूलो कोल्ड स्टोर हो । कैलालीमै स्थापना हुने गरी पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गराएको छु । अत्तरियामा पनि कोल्ड स्टोर बनाउने निर्णय गराएको छु । बाढी नियन्त्रण तथा वस्ती व्यवस्थापनको लागि कान्द्रामा ६ करोडको आयोजना लागु गरेको छु ।
मैले मन्त्री भएको बेला रासायनिक मलको मूल्य घटाएको छु । मैले पहिलो पटक मन्त्री भएको बेला किसान आयोग बनाई दिएको छु, जुन संवैधानिक एवम् शक्तिशाली आयोग हो । मैले किसान पेन्सनको योजना पनि बनाएको छु । हाम्रो सरकार बन्ने बित्तिकै किसान पेन्सनको कार्यक्रम लागू हुन्छ । जुनकारण मेरो जित्ने पर्याप्त आधार छ ।
अर्कोतिर, मेरो प्रतिस्पर्धी काँग्रेस उम्मेदवार रामजनम चौधरी २६ वर्ष जितेर जानु भएको छ । उहाँ हालको ३ नम्बर क्षेत्रको पनि होइन । उहाँले जनतालाई ठग्ने काम मात्रै गर्नु भएको छ । मलाई अन्तिम पटक जिताई देउ भनेर धेरै पटक आए, तर केहि गरेनन् । त्यो सब जनताले हेरिरहेका छन् । म यहाँको लोकल व्यक्ति हो, रामजनम यहाँको लागि पर्यटक हनु । दुई÷चार दिनको पाहुना हुन् । उहाँले केहि नगरेकोले उहाँको लागि यहाँ ठाउँ नै छैन । अर्को कुरा ३ नम्बर क्षेत्र कम्युनिष्टको गढ हो । यस क्षेत्रभित्र पर्ने कैलारी गाउँपालिका, घोडाघाडी नपा र भजनी नपामा स्थानीय निर्वाचनमा हामीले नै जितेका छौँ । यो क्षेत्र हाम्रो लालकिल्ला हो । जसले गर्दा हाम्रो हार्ने ठाउँ छैन ।
अबको मेरो अभियान यो क्षेत्रमा सिचाइँको व्यवस्था गर्ने, पुल पुलेसो बनाउने, खानेपानी बनाउने हो । सञ्चार, विद्युत, स्तरिय शिक्षा, सबै ठाउँमा पुर्‍याउने अभियान रहन्छ । निजी शिक्षकहरूको समस्या व्यवस्थापन गर्ने योजना गर्ने हाम्रो योजना हो ।
तपाईँहरूले पहिचानको मुद्धा धेरै उठाउनु भो, अहिले बिर्सिएकै हो ?
धेरैको जिज्ञासा यहि हो । हामीले उठाएको मुद्धा सकिएको छैन, बिर्सिएको पनि हैन । यो मुद्दा जारी छ । भारतमा संघीयता १३ प्रान्तबाट सुरु भएको थियो, अहिले २९ संघीय प्रान्त पुगेको छ । यहाँ उठेको पहिचान, संघीयताको मुद्दा कायमै छ । छलफलमै छ । एकै दिनमा हल हुने हैन । आज उठायो, भोलि हुने मुद्दा होइन । बहसमा गइसकेकोले निकट भविष्यमा यसको हल अवश्य हुन्छ । – नेपालीपत्रबाट